NASA "Touch the Sun" ayaa qaaday talaabo kale oo muhiim ah - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » SAYNISKA NASA "Touch the Sun" ayaa qaaday tallaabo kale oo muhiim ah - BGR
NASA "Touch the Sun" ayaa qaaday tallaabo kale oo muhiim ah - BGR
2018, NASA waxay bilowday howl ay ku sameeyneyso wax aan aqoonta cilmi-baaristu horay u qaban. Howlaha Parker Solar Probe waa dhab ahaantii ugu horeysay ee nooceeda ah, oo u sii dhawaanaya xiddigeena aan horay loo arag, horeyna ubaahan wuxuu jabiyay tiro dhowr ah .
Hadda, balaarinta ayaa sii wadaysa safarkeeda aan la rumaysan karin iyada oo dhamaystiraysa qaabkeeda labaad ee Sun, taasoo dib u soo celineysa masaafada rikoodhka ah ee la gaaro inta lagu gudajiray xiligii kowaad. Maadaama NASA ay sharxi doonto boostada cusub ee cusub, saynisyahannadu waxay doonayaan inay dib u eegaan xogta sayniska ee ay soo uruurisay baaritaankii wakhtigii udhaxnaa Sun iyo wax walbana waxay u muuqataa in ay socdaan qorshaha.
"Boorashka ayaa u shaqeynaya sidii la filayay, waana fiicneyd in la raaco dhammaan farsamada," ayuu yidhi Nickalaus Pinkine oo ka shaqeeya Johns Hopkins Applied Physics Laboratory. "Waxaan rajeyneynaa inaan ururinta xogta sayniska ka helno kulankan toddobaadka soo socda si ay kooxaha saynisku u sii wadaan inay baaraan qarsoodiga taajka iyo qorraxda."
Warqad u dirista xayawaan ee kuyaal hareeraha agagaarka sida weyn ee Sunnadayadu u muuqato mid aan wax danbi ah u aragin NASA iyo hay'adaha Japan ee JAXA ayaa dhowaan la mid ah asteroids. Dhagaxyada yaryar ee banaan waxay u baahanyihiin saxan aad u sarreeya si ay u gaarto iyo orbit ah si guul leh, laakiin Sun ayaa caqabado u ah caqligeeda.
Waa wax iska cad in kuleylku yahay dhibaatada ugu weyn ee kaabiga farsamada ee soo socota xiddig. Xitaa masaafo aad u ballaaran oo ka badan 14 malaayiin kiilomitir oo ka timaadda Sun, dareeraha qoraxda ee Parker waa in uu la tacaalo heerkul aad u daran. NASA Thermal Shield Technology wuxuu ahaa mawduuc kulul inta lagu jiro dhismaha baaritaanka iyo illaa hadda, waxay ku guuleysatey caqabadaha sida qorshaysan.
Laakiin baaritaanka ugu weyn ee baaritaanka ayaa weli ah inuu yimaado. Maaddaama xayawaanku sii wadi doono in uu ka dhigo baasaska ugu dhow ee Sun, waxay u soo dhowaan doontaa meel u dhow isla markaana u dhow dusha sare ee xiddigga, illaa iyo malaayiin milton mayl ah ama sidaas. Baaritaanku wuxuu la kulmi doonaa heerkulka 4 Darajo Fahrenheit, kulul ku filan si uu u dhalaalo birta. Haddii uu ka badbaado, wuxuu aqoonyahanka ku baran karaa waxyaabo cusub oo ku saabsan shaqeynta xiddigo sida Sun.
Source Source: Xarunta Goddard Spaceflight
Dab-damis kale ayaa qarxay Ruushka, dad badanna waxay ku raaxaysteen fiidiyoowga - BGR
SHAQOOYINKA SHAQADA EE HOUSEHOLD SHAQAALAHA / CARRUURTA
Laptops in ka yar 1000 euros - Talooyin
Paris gudaheeda, 23 "jeexa jaalaha ah" waxay bilaabmaysaa xasilooni